Shanti malyan ee logo talagaley COVID19 MEEDEY MADAAMA OXGEN LA AAN LAGU DHINTEY – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Shanti malyan ee logo talagaley COVID19 MEEDEY MADAAMA OXGEN LA AAN LAGU...
Shanti malyan ee logo talagaley COVID19 MEEDEY MADAAMA OXGEN LA AAN LAGU DHINTEY
Shan Milyan oo dollar ayaa dowladu sheegtay in ay u qoondaysay la tacaalida cudurka Coronavirus. Lkn nasiib daro shalay Isbitaal Martiini waxaa daryeel xumo caafimaad ugu geeriyooday Wasiir Hirshabelle Khaliif Muumin kadib markii loo waayay oksijiin (oxygen) uu ku neefsado sida eheladiisa iyo siyaasiin qaraabo la ah marxuumka warbaahinta u sheegeen❗️
Haddaba su’aashu waxay tahay xagee la geeyay lacagtii loo qoondeeyay la tacaalida cudurkaan. Jeeb dad kale miyey gashay mise jidka ayay ku soo jirtaa. Hadiise mas’uul dowladeed daryeel xumo caafimaad ugu geeriyooday Isbitaalkii dowladu sheegtay diyaarintiisa in malaayiin dollar lagu bixiyay, makula tahay in daryeel caafimaad uu ka heli karo muwaadin danyar ah oo cidina dabo socon?!
Waxaan ugu baaqayaa madaxda dowlada in arintaan si degdeg ah wax uga qabtaan, dadkana aysan u loogin cudur iyo daryeel xumo wada jira, hadii kale dadka loo run sheego si dadkooda ay ula tacaalaan.
Previous article3 qof oo laga helay COVID19 SOMALILAND
Next articleGuddida Ka Hortagga Covid-19 ee Somaliland oo Qodobo Cusub soo saaray.